Voadika ny 25 Janoary 2013 15:00 GMT
Tsy dia fandre mahazatra amin'ny vaovao misongadina ny resaka seranam-piaramanidina, raha tsy resahina ny loza an-habakabaka na misy ny fitokonana ataon'ny mpiasa ka mivadika ho afo fandiovana ho an'ny mpandeha izany. Na dia izany aza, manana seranam-piaramanidina iray malaza i Espaina, izay nivoaka tamin'ny gazety sy tamin'ireo lohatenim-baovao antserasera hatramin'ny nisokafany: Seranam-piaramanidina Castellón [es].
Saingy tsy izay ihany. Niakatra 6.484.935 euro ny fandaniana amin'ny saram-pitrandrahana tamin'ny taona 2011. Tamin'ity vola ity, 5.092.596.22 euro no nolaniana tamin'ny dokam-barotra sy ny serasera; izany hoe, maherin'ny 78%. Ny ambiny 918.663 euro kosa dia nalefa tany amin'ny sampan-draharaha matihanina tsy miankina: ka 368.865.49 euro no karaman'ireo mpiasa fito tamin'izany; 223.074 kosa nolaniana tamin'ireo asa hafa notontosain'ireo orinasa hafa; 129.430 tamin'ny sampan'asa hafa; 23.412 ho an'ny hofan-tany sy ny hetra ary 23006 ho an'ny fandaniana amin'ny banky.
Carlos Fabra [es], no anisan'ny tompon-kevitra tamin'ity seranam-piaramanidina ity, politisianina avy ao amin'ny antokom-bahoaka izy, ary anaty fianakaviana mpandova ara-politika ao Castella. Izy no lehiben'ny faritra nanomboka ny 1995 hatramin'ny 2011, toerana izay nialàny taorian'ny fiampangana azy ho nanao kolikoly sy nanararao-pahefana tamin'ny taona 2010. Rain'i Andrea Fabra ihany koa izy, solombavambahoaka avy ao amin'ny antoko PP izay nanjary nalaza ratsy volana vitsy lasa izay noho ny fitabatabany hoe “Tsy raharahako ireo!” tao amin'ny Kongresy raha nanambarana ny fampihenana tetibola ho an'ny fanampiana ireo tsy an'asa ny filoha Rajoy.
@jetxarri: Iray isaky ny faritra! RT”@quiquepeinado: Zoorupto, toerana hiompiana olona tratra nanao kolikoly “.